China Dongshen endrika endrika borosy makiazy vaovao napetraka 14mm volafotsy volomparasy volon'ondry varahina ferrule hazo fikirakirana matihanina mpanakanto makiazy makiazy kosmetika borosy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen endrika famolavolana makiazy vaovao napetraka 14mm volafotsy volomparasy volon'ondry varahina ferrule hazo tantana matihanina makiazy makiazy makiazy kosmetika borosy
Miaraka amin'ny borosy makiazy 14 isan-karazany, ny tsirairay natao manokana hamahana ny faritra voafaritra amin'ny hoditra, ny sombin-tsarimihetsika 14 master studio dia namelatra endrika tsara ny tarehy ary niara-namorona famaranana tsy misy kilema izay endrika rehetra. Manintona, manintona ary voadio, ity famoriam-bola ity dia ho fanampiny tsy mampino amin'ny latabatra fiakanjoan'ny mpidoroka hatsaran-tarehy. Tongava vonona amin'ny studio miaraka amin'ity borosy fanaingoana matihanina napetraka avy any DONGSHEN ity.
Material Hazo na fitaovana hafa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
- Professional borosy makiazyvolom-borona malefaka sy matevina izy io, ny tahon'ny ergonomika dia mamela anao hifangaro amin'ny fototra, ranon-javatra, fanosotra ary vovoka tsy misy reraka raha tsy reraka na moka ny tanana… haingana sy mora kokoa noho ny teo aloha. Ny Make up borosy napetraka matihanina manana, borosy tarehy, borosy eyeshadow, borosy mibontsina, borosy vovoka, borosy manafina maso borosy maso hanaingoana ny fanaingoana anao nefa tsy manapotika ny banky.
- Fitaovana borosy makiazy ambony tantana avo lenta. Tsy fahasosorana amin'ny hoditra, tsy fitetezana.
- Ampiasao ny borosy miafina fisaka sy zoro hanafina ny kilema na kileman-toetra.
- Ny volo synthetic dia madio ara-pahasalamana ihany koa ary maharitra amin'ny fampisehoana matihanina.
* Hovaliana amin'ny 24 ora ny fanontanianao.
* Ho voaro daholo ny mombamomba anao sy ny hevitrao momba ny vokatra.
* Ny fahaizana mamorona vokatra vaovao dia afaka manampy anao hanitatra ny tsenanao.
* Vidiny avo lenta sy mifaninana.
* Fotoana fanaterana haingana sy serivisy tsara.
* Manana dept ho an'ny matihanina izahay.
* OEM & ODM dia azo ekena.
* Afaka mividy vokatra izay mahafa-po anao ianao.
* Ny vokatra marobe dia azo safidiana.
F: Inona avy ireo vokatrao lehibe?
A: Ny tena vokarinay dia ny borosy makiazy, ny volombava manaratra na ny volombava, ny fitaovana fanaovana makiazy ary ny fitaovana fanaratra.
F: Afaka mamorona ho ahy ve ianao?
A: Eny, afaka mamolavola toy ny fangatahan'ny mpanjifa, anaran'ny orinasa, nomeraon-telefaona, logo, sns ianao, mila mandefa sary famolavolana fotsiny izahay.
F: Mandra-pahoviana ny ora fandefasana anao?
A: Ny fotoana fanaterana voalohany ho an'ny mpanjifa vaovao dia matetika 50 andro. Aorian'ny fiaraha-miasa marobe eo amintsika, dia azo hafoina 30 ~ 45 andro izy io.
Teo aloha: Borosy kosmetika 12 pcs napetraka tsy misy habibiana volo sentetika volo hazo mainty hazo fikirakirana marika manokana tarehy borosy tarehy napetraka
Manaraka: Marika manokana namboarina ambongadiny 12 pcs raozy makiazy mena napetraka vovoka mena tarehy contour manasongadina eyeshadow fampifangaroana kosmetika borosy fitaovana
borosy kosmetika napetraka
Borosy makiazy napetraka borosy matihanina
Fitaovana borosy makiazy
Dongshen makeup borosy vegan namana synthetic ...
Dongshen rendrika hoditra malefaka volon'osy malefaka mena ...
Dongshen kabuki borosy orinasa maharitra vegan syn ...
Faritra fiharatra, Barber Shave, Manaova borosy, Mametraha makiazy borosy, Fitaovana borosy makiazy, borosy makiazy napetraka,